सात लाख रुपैयाँमा टाटाको इलेक्ट्रीक एसयूभी नेक्सन कार ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
सात लाख रुपैयाँमा टाटाको इलेक्ट्रीक एसयूभी नेक्सन कार !
सानो गाडी अहिले शहरी जीवनका लागि अनिवार्य जस्तै भएको छ ।
कुनै समय विलासिताका लागि चढ्ने गाडी अहिले नेपालीका लागि समेत अत्यावश्यक जस्तै बनेको हो । तर गाडीका मूल्य महँगो हुँदा धेरैले किन्न चाहेर पनि मन मारेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर शुरुमा थोरै रकम लगानी गरेर गाडी चढ्न इच्छुकका लागि टाटाको इलेक्ट्रीक एसयूभी नेक्सन राम्रो विकल्प हुनसक्छ ।
त्यसो त अहिले टाटा नेक्सन इभीको सुरुवाती मूल्य ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर शुरुमा गाडी किन्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा हुन्छ । अर्थात शुरुमा ७ लाख १९ हजार ८०० रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी रकम कर्जा सुविधामा तिर्ने गरि यो गाडी लिनसक्नेछन् । यसका लागि टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग र एनएमबि बैंक बीच कर्जा प्रदान गर्ने विषयमा गत साता मात्र सम्झौता भएको छ ।
नेक्सन इभी खरिद गर्न इच्छुक हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुले शुन्य प्रतिशत प्रिमियम सहित बैंकको बेसरेट ब्याजदरमा २४ घन्टा भित्र कर्जा सुविधा पाउने बताइएको छ । बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।
यसरी लिएको कर्जा ७ वर्षमा तिर्दा ग्राहकले मासिक किस्ता ४३ हजार ७२५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकले ५ वर्ष परिवर्तन नहुने स्कीममा पनि गाडी कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो स्कीममा गाडी किन्ने ग्राहकले भने ८.४९ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ ।